Isici seKhamera ye-IPad Pro 'yeNqanaba leKhamera' iya kuXhasa iiNkqubo zeNdawo yesiThathu Ndisuka mac
Inqaku lekhamera le-IPad Pro 'eliyiNqanaba lesiGaba' liya kuxhasa ii -apps zomntu wesithathu
Nge-20 ka-Epreli kunye neApple iboniswe eluntwini kumsitho wasentwasahlobo, ipro Pro entsha.Umatshini nje ngokufana nekhompyuter kodwa uswele kancinci. Ewe ngetekhnoloji ephuma kwaye ngakumbi nge-M1 chip sinokwenza izinto ezimangalisayo. Nangona kunjalo, kukho inqaku elitsha elibambe ingqalelo enkulu: IBakala leZiko. Ikhamera ejongeka ngathi inobomi bayo kwaye siyazi ukuba iyakuxhasa ii -apps zomntu wesithathu.
Iimodeli ze-M1 iPad Pro Kutshanje kubhengezwe ngu-Apple inqaku elitsha lokubiza ividiyo ebizwa ngokuba yiCentre Stage, ethi sebenzisa ukufunda ngomatshini pan ngokuzenzekelayo uze usondeze ikhamera yangaphambili ukukugcina usembindini kwisakhelo njengoko ushukuma. Inzululwazi yamyinyani kwaye iluncedo kakhulu kula maxesha apho iintlanganiso ezibonakalayo zibaluleke ngakumbi kwaye ziphantse zibe sisinyanzelo.
Inqanaba leZiko liyafumaneka kuzo zombini iindlela I-Pro-intshi ye-11 intshi njenge-12,9-intshi enkosi kwi-chipset entsha kunye nenkqubo yekhamera ye-TrueDepth ephuculweyo, kubandakanya nekhamera ye-12MP ebanzi kakhulu ngaphambili enendawo yokujonga eyi-120 °, xa kuthelekiswa nomgangatho. Inkqubo cIkhamera yangaphambili ye-7 MP ebanzi yeemodeli zesizukulwana esidlulileyo ayenzi ukuba kube lula Isigaba seZiko sibetha ii-iPads ezindala. Inkqubo entsha ye-11-intshi ye-iPad iqala kwi- $ 879, ngelixa iprosesa entsha ye-12.9-intshi ye-iPad iqala kwi- $ 1.199. Uku-odola kwangaphambili kuqala ngo-Epreli 30 kwaye ukubakho kuqala kwisiqingatha sesibini sikaMeyi.
Akukho nto iseleyo yokunwabela la mava matsha obuso beFoTime kwaye ezinye iinkqubo zomntu wesithathu ukuba sinethemba lokuba kancinci kancinci bazakumanyana. Siza kulinda ukuba sisebenzise le khamera intsha eya kuthi ngokuqinisekileyo isothuse ngokulungileyo. Okwangoku, kuhlala kuphela ukubala iintsuku de kuvulwe ixesha lokuthengisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Inqaku lekhamera le-IPad Pro 'eliyiNqanaba lesiGaba' liya kuxhasa ii -apps zomntu wesithathu
Le yindlela iApple ethi thaca ngayo ii-AirTag ezintsha